Vaovao - "Mamorona ekipa amin'ny alalàn'ny firaisankina sy ny fiaraha-miasa" –Nahatontosa soa aman-tsara ny asa fananganana ekipan'ny departemantan'ny marketing any Kangyuan
Lignngeal Mask Airway
Fitaovana fisorohana ny valanaretina
"Mamorona ekipa amin'ny alalàn'ny firaisankina sy ny fiaraha-miasa" –Nahatontosa soa aman-tsara ny asa fananganana ekipan'ny departemantan'ny marketing any Kangyuan
Rehefa tonga ny lohataona dia velona ny zava-drehetra. Tamin'ny 26 martsa 2021, ny Sampan-draharahan'ny Marketing an'ny Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd. dia nanao hetsika fananganana ekipa tao amin'ny Farihin'i Nanbei. Samy nankafy ny hetsika ny rehetra tamin'ny alàlan'ny fihobiana, fifaliana, hafanam-po.
Tamin'ny 9 ora maraina, tonga ara-potoana tao amin'ny Farihin'i Nanbei ny Sampana Marketing ao Kangyuan. Taorian'ny hetsika famakiana ranomandry tsotra dia vita ny fanaovanay vondrona ary namolavola ny sainan'ny ekipa, ny fananganana ary ny teny filamatra. Dia nanomboka ny fananganana ekipa. Ny mpitarika ny hetsika dia nitarika anay hanatanteraka lalao mahaliana maro. Niara-niasa sy niara-niasa izahay. Indraindray nahery vaika ny atmosfera ary indraindray miala sasatra. Tsy nanenjana ny elanelan-tany fotsiny izany fa nanatsara ny firaisan'ny ekipa koa, naneho ny fanahin'ny firaisankina, ny fiasana mafy ary ny fandrosoana tsara nataon'ny mpiy Kangyuan '.
Tamin'ny mitataovovonana dia tonga tao amin'ny B & B teo an-tendrombohitra izahay ary nanomboka ny barbecue eny ivelany. Miara-miasa izahay. Ny sasany nanasa legioma ary nanapaka hena. Ny sasany nanamboatra ny barbecue. Izahay rehetra dia feno hafanam-po ary samy nahatsapa ho be atao sy faly izahay ka ilay B & B kely dia feno hafanana sy fitiavana.
Taorian'ny sakafo atoandro dia nifanatrika tamin'ny Baiyun Pavilion sy ny farihin'i Shanhai ny rehetra ary nankafy ny fitsotsiky ny lohataona sy ny fihiran'ny vorona malefaka. Amin'ny endrika fety dite dia natambatra ny aingam-panahy avy amin'ity hetsika fananganana vondrona ity miaraka amin'ny asan'i Kangyuan isan'andro hanangonana ny fahendrentsika sy hiarahanay hijery fomba fiasa mahomby sy mirindra kokoa.
Amin'ity hetsika fananganana ekipa ity dia nizara traikefa nahafinaritra tamin'ny hatsembohana, fihomehezana, fifanakalozan-kevitra ary fahatsapana ny saina izahay. Amin'ny ho avy, isika, tafaray ho iray, dia mifampiraharaha, mifankahazo amin'ny tanjona iray ihany, dia hiasa mafy hampiroborobo ny fananganana indostrian'ny fitsaboana sy ny fahasalamana.
Ny vokatray lehibe indrindra dia: Silicone Foley Catheter, Laryngeal Mask Airway, Silicone Stomach tube, Endotracheal Tube, sns.
Adress: Lalan'i Songpodong, Tanànan'i Shendang, Haiyan, Zhejiang, Sina
Telefaona: 15825721708 / 0086-573-86725883 / 0086-573-86725885
ntroduction sy fampiharana ara-pahasalamana an'ny L ...
"Mamorona ekipa amin'ny alàlan'ny Unity sy Co ...
2021CMEF: Manatsara ny kalitaon'ny fiainana i Kangyuan ...
Nandray anjara tamin'ny CMEF 2020 ve ianao?
Fa maninona ny làlan'ny saron-tava an'ny laryngeal an'i Kangyuan?
© Zon'ny mpamorona - 2020: Zo rehetra voatokana.